နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ Android ဂိမ်းများ - ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ Androidsis (စာမျက်နှာ ၁၀)
အသေအပျောက်အများဆုံးသေဆုံးမှုများမှာ Mortal Kombat X ဖြင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့လာသည်
Mortal Kombat X သည်ရက်စက်စွာသေဆုံးမှုနှင့်စစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်မှုများအတွက်သင်၏ Android ဖုန်းသို့လာသည်
Hay Day သည်ဒါဘီတိုးတက်မှုများ၊ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အသစ်များနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုရရှိသည်
Hay Day အသစ်ပြောင်းလဲမှုသည်ဒါဘီပွဲများအတွက်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ mascot နှင့်စက်အသစ်နှစ်လုံးကဲ့သို့အသစ်အဆန်းများနှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်။
ဒီနေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ကို Android, Space Liner အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းကဏ္ section၊ မင်းကိုပထမစက္ကန့်ကနေချိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်ကောင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အသစ်တစ်ခုနဲ့ကစားပါမယ်။
Corridor Z သည်အဆုံးမဲ့အပြေးသမားများနှင့်ဖုတ်ကောင်များအားလှည့်ကွက်တစ်ခုပေးသည်
Corridor Z သည်မရေမတွက်နိုင်သောအပြေးသမားများနှင့်ကွဲပြားသောရှုထောင့်နှင့်၎င်းကိုဆွဲဆောင်သောဖုတ်ကောင်အခင်းအကျင်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။
Implosion၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအနာဂတ် hack တစ်ခုနှင့်သင်မလွဲနိုင်သည့်မျဉ်းစောင်း
Implosion သည်သင်၏စမတ်ဖုန်း၏ကြီးမားသော hack နှင့် slash မှသင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်ဂရပ်ဖစ်စွန့်ပစ်မှုအားလုံးကိုသင့်စမတ်ဖုန်း၏ screen သို့သယ်ဆောင်လာသည်။ မရှိမဖြစ်
Dragon Hills သည်မကြာသေးမီလများအတွင်း Android သို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး Arcade များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်းထန်သောနဂါးကိုစီး။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖျက်ဆီးပါ
ဂျိုး Danger, အန္တရာယ်အရှိဆုံးလေ့ကျင့်သည်သင်၏မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏နောက်ကျော၌သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်း
Joe Danger, မော်တော်ဆိုင်ကယ်အထူးကုသမားရိုးကျဖြစ်နိုင်သည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
အမေဇုံသည်ပေးရသည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်ယူရို ၁၂၀ ကျော်ကိုပေးသည်
ယူရို ၁၂၀ ကျော်ဖြင့်တန်ဖိုးရှိသည့် ၂၆ ပေးဆောင်ရသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများသည် Amazon မှလာသည့်အခမဲ့အစီအစဉ်သစ်ဖြစ်သည်
Dino ၏စွန့်စားမှုများသည်အိမ်ထဲရှိကလေးငယ်များအတွက်အထူးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မိဘများနှင့်သူတို့နှင့်အပြန်အလှန်ဖတ်ရှုနိုင်ရန်လည်းကူညီပေးသည်
အသစ်ထုတ်လုပ်မှုအသစ်ကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ Blizzard ၏ Hearthstone ကို Android ဖုန်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ
Google က Android အတွက်စာပို့ဂိမ်းကို၎င်း၏ app store မှတားမြစ်ထားသည်။ ကံကောင်းတာကက Amazon မှာဝယ်လို့ရပေမယ့်ယုတ္တိမရှိဘဲအတိုင်းအတာ
သင်၏အင်ပါယာကို CivCrafter ဖြင့်ဖန်တီးပါ
CivCrafter သည်ယဉ်ကျေးမှုအပြီးတွင်လိုက်နာနိူင်သည်။ သို့သော်သင်၏အင်ပါယာကိုဖန်တီးရန်သဲလွန်စထဲ၌ထည့်ထားသောပျင်းစရာဂိမ်းတစ်ခုမှလာသည်။
Power Rangers Dash နှင့်အတူတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲများမှလူစွမ်းကောင်းများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါ
Power Rangers Dash သည် Power Rangers နှင့်အတူအဆုံးသတ်အပြေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဇာတ်ကောင်ကောင်းများဖြစ်ရန်အခြေခံများနှင့်ကိုက်ညီသောဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်
Poco Eco ၏စွန့်စားမှုများ၏အိပ်မက်ကမ္ဘာကိုရှာဖွေပါ
အမြင်အာရုံရောအသံအရည်အသွေးပါပါ ၀ င်မှု၏ Poco Eco ၏စွန့်စားမှုသည် Monument Valley ၏ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်သောအထူးဗီဒီယိုဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Minecraft Pocket Edition Beta သည်အရေခွံများ၊ ကလေးဖုတ်ကောင်များ၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အခြားများစွာပါ ၀ င်သည်
အသစ်သော beta 0.11.0 version အသစ်ကို Minecraft Pocket Edition ကဲ့သို့အရေခွံများ၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ကလေးဖုတ်ကောင်များ update လုပ်ခြင်းသည်သင့်ကိုစောင့်မျှော်စေသည်။
သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကို DomiNations နှင့်လုံး ၀ လွှမ်းမိုးရန် ဦး ဆောင်လမ်းပြပါ
DomiNations သည် Clan of Clash နှင့် Civilizations ၏ရောနှောမှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Tetrobot နှင့် Co. , နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စ
Tetrobot နှင့် Co. ၏အဆင့်တိုင်းကို ဖြတ်၍ အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ပဟေvideoိဂိမ်းတစ်ခု
Doodle Adventures တွင်ကူညီရန်သင်၏အဆင့်ကိုဖန်တီးပါ
ဒီ Doodol ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့နိုင်ငံကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာအောင်ကူညီဖို့ ၅၁ ဆင့်က Doodle Adventure မှာစောင့်နေကြတယ်။ ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခမဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းမှာ
Slayin, သင့်ရဲ့ဓားကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့အဆုံးမဲ့ RPG
Slaying Slayer ကရိုးရှင်းတဲ့ RPG ကိုကြိုတင်နိဂုံးချုပ်များစွာမရှိဘဲကောင်းမွန်သောအချိန်ရရန် retro-style ဂိမ်းတွင်မရပ်မနားကစားရန်အဆိုပြုထားသည်။
Fast & Furious: အမွေ၊ လာမည့် Furious7ရုပ်ရှင်အတွက်အပြည့်အ ၀ မြန်သောလူမျိုး
Fast & Furious: Legacy သည် Walker ကိုအဓိကဇာတ်ကောင်များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောဤမြေအောက်ကားပြိုင်ကားစီးကရက်ရှိရုပ်ရှင်ကားအားလုံးကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။
Boss Monster သည်ကဒ်ကစားနည်းတွင်လူဆိုး၏အခန်းကဏ္putsကိုထည့်သည်
Boss Monster သည်လူကြိုက်များသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗားရှင်းမှဆင်းသက်လာပြီးပြိုင်ဘက်လေး ဦး နှင့်ကစားနိုင်သောကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Tomb Raider ငါသည်အကောင်းဆုံး Lara Croft နှင့်အတူစွန့်စားခန်းများနှင့်ပဟေlesိများအားလုံးကိုယူဆောင်လာသည်
polygons နည်းပါးသဖြင့် Lara Croft သည် Tomb Raider I ဖြင့် Android သို့လာသည်
Taichi Panda သည် SnailGames မှ multiplayer နှင့် PVP ပါသောအလွန်ကြီးမားသောထောင်ထဲတွင်တွားသွားသည်
Taichi Panda သည် MMO ဂိမ်းများဖြစ်သော SnailGames မှကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ ပျော်မွေ့ခြင်းကိုမရပ်တန့်ရန်အလွန်ကောင်းသောထောင်ထဲတွင်ရှာဖွေစက်
Meat Land မှ Silly Sauge၊ ပျော်စရာကောင်းပြီးအရူးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့် dachshund နှင့်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်
Meat Land ရှိ Silly Sauge သည် Android အတွက်သင့်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှုရရှိစေမည့်စပ်စု။ ပျော်စရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဂြိုလ်သားစတား Menace, ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး Ripley သည်သင်၏ alien ည့်သည်များ၏သင်္ဘောကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်သင့်အားစောင့်နေသည်
သင့်အားနီးကပ်သော Alien Star Menace အတွက်နည်းဗျူဟာနည်းဗျူဟာသည် Alien Saga ၏ဇတ်ကောင်ဖြစ်သည့် Lieutenant Ripley
ကြီးမားသောအဆုံးမဲ့အပြေးသမားတစ် ဦး အတွက်ဓာတ်ပုံများ၊
Tron သည် ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမှဒဏ္myာရီဆန်သောရုပ်ရှင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး Fotonica ဟုခေါ်သောဤဂိမ်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ခုခုကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည်။
Square Enix သည် Android တွင် Final Fantasy Record Keeper ကျောက်မျက်ရတနာကိုစတင်ခဲ့သည်
Square Enix သည် Fantasy Record Keeper ကို Android တွင်ပရိတ်သတ်များနှင့်ပရိသတ်မဟုတ်သူများနှစ်သက်သည့်အတွက်အခမဲ့ဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Modern Combat5သည် freemium ဖြစ်လာသည်
Gameloft သည်မကြာသေးမီကမှကြေငြာလိုက်သည်။ Modern Combat5သည်အခြားဂိမ်းများနှင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သော freemium model ကို လိုက်၍ အခမဲ့ဖြစ်သည်
Flop Rocket သည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂိမ်းများနှင့်အာကာသယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက်ထူးခြားသည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။
Stormblades သည် Subway Surfers ကိုဖန်တီးသူများထံမှလာသည်။ အသုံးပြုသူအားဓားနှင့် Endless Runner တို့၏ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုယူရန်ရည်ရွယ်သည်။
Pocket Mine2နှင့်အတူရွေးခြင်းနှင့်ဂေါ်ပြားကိုယူပါ
Pocket Mine2သည်မြန်ဆန်။ စွဲလမ်းစေသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပစ္စည်းများကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာတူးရန်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်
အမေဇုံသည် Father's Day တွင်ပေးဆောင်ရသော app များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်ယူရို ၁၀၀ ကျော်ကိုပေးသည်
ဤဖခင်နေ့တွင်အမေဇုံကအက်ဒ် ၃၃ လုံးဖြင့်ယူအက်စ် ၁၀၀ တန်ဖရက်ဒီ၏ ၂ တွင်ငါးညဥ့်ကဲ့သို့ဗီဒီယိုဂိမ်းများဖြင့်တန်ဖိုးထားသည်။
ဖခင်များနေ့တွင်ပေးမည့်ဗီဒီယိုဂိမ်း ၅ ခု
Androidsis မှမင်းတို့အဖေများနေ့ကိုပေးဆပ်ရန်ဗီဒီယိုဂိမ်းကောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးလိုသည်။ ဒီမရှိမဖြစ်ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅ ခုကိုချရေးပါ
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် Nintendo ဂိမ်းများတီထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟာလများစွာထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
Cinderella Free Fall၊ သူ၏ရုပ်ရှင်အသစ်အတွက်နောက်ထပ် Candy Crush ဖြစ်သည်
စင်ဒရဲလား Free Fall သည်မကြာမီကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ချိမည့်ရုပ်ရှင်၏ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်
Table Tennis Touch သည်သင်၏ Android တွင် Ping-Pong ၏အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းကိုကစားသည်
Table Tennis Touch ဖြင့်သင်၏ Android အတွက်စားပွဲတင်တင်းနစ်အားကစားနည်းပြကြီးရှိသည်
Rovio မှအသစ်သည် Angry Birds Stella POP ဖြစ်သည်!
Rovio မှအသစ်သည် Angry Birds Stella POP ဖြစ်သည်! ရောင်စုံဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် Jolly Jam ၏ခြေရာကိုလိုက်သည်
Dungeon Hunter 5, နတ်ဆိုးများသည် Gameloft ထံမှဤကြီးမားသော hack & slash သို့ပြန်လာကြသည်
Dungeon Hunter5တွင်ကောင်းမွန်သောကစားနည်းများစွာရှိပြီးကစားကွင်းနေရာများစွာတွင်ဖြုန်းတီးသော၎င်း၏ကစားနိုင်သူများစွာ၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အရည်အသွေးများရှိသည်
Clash of Zombies II, Clash of Clans စတိုင်လ်ရှိဖုတ်ကောင်ဂိမ်း
Clomb of Zombies II သည်အထူးသဖြင့်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်ရပ်၏ပရိသတ်များအတွက်ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း Clash of Clans ၏ကစားနည်းနှင့်စတိုင်ကျမှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာသည်။
သင်၏မျှော်စင်ကို Magic Touch: Wizard ဖြင့်အမူအယာများဖြင့်ကာကွယ်ပါ
အမူအယာများဖြင့်သင်၏မျှော်စင်ကိုဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားသည့် Magic Touch: Wizard ကိုဖယ်ရှားရမည်
ရောမကိုရှေးဟောင်းနတ်ဘုရားများဖြစ်သော Zeus, Hades and Ares မှအက္ခရာသုံးမျိုးဖြင့်ကာကွယ်ပါ
တီထွင်ထားသော Noodlecake စတူဒီယိုများမှ Buzz Killem arcade အတွက် Retro ဂရပ်ဖစ်
Buzz Killem သည် Noodlecake စတူဒီယိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအရအထင်ရှားဆုံးစတူဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည့် arcade platform တစ်ခုဖြစ်သည်။
Cut the Rope ကိုဖန်တီးသူများထံမှဘုရင်သည်သူခိုးများဖြစ်သည်
Cut the Rope ကိုဖန်တီးသူများထံမှ King of Thieves သည်စင်မြင့်နှင့်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
Actimel အသင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်မျှဝေလိုသောဂိမ်း
ဒီနေ့မှာတော့ Team Actimel, Augmented Reality-style ဂိမ်းကိုတင်ပြပြီးသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြင်ပတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်အတွက်သင်နှင့်သင်သာထိန်းချုပ်ထားသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်နီကို Baron Red: Planes of War နှင့်အတူသွားပါ
အနီရောင် Baron: လေယာဉ်စစ်ပွဲသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးရှိကြောင်းသက်သေပြရန်အတွက်စပျစ်သီးပျံလေယာဉ်ပျံသန်းရန်ပထမကမ္ဘာစစ်သို့ပို့ဆောင်သည်
Formula 1 ၏ပရိသတ်များအတွက် Motorsport Manager ဟုခေါ်သည့်အလွန်ကြီးစွာသော Simulator ကိုလာသည်
Motorsport သည်သင့်အားဤမော်တော်အားကစား၏အာရုံအားလုံးကိုယူဆောင်လာစေမည့် Motorsport Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်
Gameloft's Age of Sparta နှင့်အတူရှေးဂရိကိုခုခံကာကွယ်ရန် Spartan စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းပါ
Age of Sparta သည် Gameloft စတူဒီယို၏လက်မှကာကွယ်ရန်ရှေးဟောင်းဂရိနိုင်ငံသို့ရောက်သွားသည်
[APK] Android အတွက် Sonic Runners ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ။ ဤဂန္ထဝင်ဗီဒီယိုဂိမ်းအမြန်နှုန်းကိုအခြားသူများထံမှနှစ်သက်သည်
ဤတွင်သင့်အား Android နှင့် Sonic Runners အတွက် Installation method ကိုချန်ထားခဲ့ပြီးလက်ရှိနှင့်ဂျပန်နှင့်ကနေဒါတွင်သာရနိုင်သည်။
Android အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများ: Today, Pixelman Free
Pixelman Free သည် Android အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင် Retro ဂရပ်ဖစ်အချို့ကိုပြသနေစဉ်အလွန်အမင်းကစားရလွယ်ကူခြင်းအတွက်အောင်ပွဲခံသည်။
Square Enix ၏အလှည့် -based RPG Heavenstrike ပြိုင်ဘက်များကိုယခု Android တွင်ရနိုင်သည်
Heavenstrike ပြိုင်ဘက်များကိုယနေ့အချိန်၌ Android တွင်ရနိုင်သည်။ အလှည့် -based RPG ဂိမ်းအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအလောင်းအစားဖြစ်သည်
SBK14 တရားဝင်မိုဘိုင်းဂိမ်းနှင့်အတူကမ္ဘာ့ Superbike ချန်ပီယံ၏စိတ်အားထက်သန်မှု
အချိန်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် SBK14 သည် Android ရှိကမ္ဘာ့စူပါဆိုင်ကယ်များ၏အာရုံများကိုယူဆောင်လာသည်
ဆုရ Android အတွက် Witcher Adventure ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
RPG ကိုအခြေခံထားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကိုယခု Witcher Adventure နဲ့ Android မှာရရှိနိုင်ပါပြီ
[ဗွီဒီယို] Banana Kong၊ ခုန်။ ခုန်ပါ၊ တွန်းထုတ်ပါ။ လမ်းပေါ်တွင်ရှိသည့်ငှက်ပျောကိုမလွတ်စေနှင့်
Banana Kong သည် Android အတွက်ပျော်စရာပလက်ဖောင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားသည့်ဖော်ရွေသော Gorilla ကောင်လေး၏ဖိနပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
Newspaper Boy Saga သည်မူရင်း Atari Paperboy အား ပို၍ အကြမ်းဖက်သောလှည့်ကွက်များနှင့်ပြန်လည်သယ်ဆောင်သည်
Newspaper Boy Saga သည် Attha ထက် ၁၉၈၅ ခုနှစ်ကထက်အကြမ်းဖက်သောဒြပ်စင်များပိုမိုများပြားသော်လည်းဒဏ္thာရီ Paperboy နှင့်များစွာဆက်စပ်မှုရှိသည်။
The Horus ယူဖောက်ပြန်မှုနှင့်အတူ Clans Warhammer ၏တိုက်ပွဲဖြစ်: Drop Assault
The Horus Heresy: Drop Assault သည်အခြေခံအားဖြင့်သင်အခြေခံထားသည့်မဟာဗျူဟာဂိမ်းအမျိုးအစားတွင်ရှိသည့်အခြားသောလမ်းညွှန်များကိုလိုက်နာသည်။
Rovio ကြယ်ပွင့်သည် Jolly Jam ကို Play Store သို့ Candy Crush နှင့်အစားထိုးသည်
Jolly Jam သည် Candy Crush Saga ၏နောက်ဆက်တွဲတွင်ပါ ၀ င်သော်လည်း Tiny Thief ကဲ့သို့ Rovio Stars ဂိမ်းဖန်တီးသူများ၏ထောက်ခံအားပေးမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံနှင့်အတူ
Ubisoft ရဲ့ Monkey King Escape နှင့်အတူ Monkey King ဖြစ်လာသည်
Ubisoft သည် Play Store သို့ Monkey King Escape နှင့်အတူ 'Endless Runner' ၏အရည်အသွေးမြင့်ခေါင်းစဉ်ကိုထပ်မံသယ်ဆောင်လာသည်။
ဒေါ်လာစျေးကိုညတွင်းချင်း AdVenture အရင်းရှင်နှင့်ရယူပါ
သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းရှင်အင်ပါယာကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့် AdVenture အရင်းရှင်စနစ်ဖြင့်ဘဏ္aာရေးငါးမန်းဖြစ်လာနိုင်သည်
စွဲလမ်းစေသော Android ဂိမ်းများ - ယနေ့၊ Break Square
BreaklSquare သည်ကျွန်ုပ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သော Android အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
[ဗွီဒီယို] Red Ball4သည် Android အတွက်ပျော်စရာ platform ဖြစ်သည်
ဒီနေ့ Red Ball4လို့ခေါ်တဲ့ Android အတွက်ပျော်စရာပလက်ဖောင်းဂိမ်းကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်။ မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးငါတို့ကိုအရမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုကုန်လွန်စေပါလိမ့်မယ်။
Crunge, တစ် ဦး irreverent Super Pang Arcade
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောပုံပန်းသဏ္withာန်ရှိသော“ Crunge” ဟုခေါ်သောအလင်းရောင်ရှိသောဂိမ်းတစ်ခုနှင့် ပို၍ ပင်ထူးဆန်းသောရန်သူများဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤ Arcade အမျိုးအစားကိုနှစ်သက်သည်ဆိုလျှင်၎င်းကိုစမ်းကြည့်ပါ
Slimes ၏ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထူးဆန်းသောနောက်ဆုံး Fantasy စတိုင် RPG
Slimes ၏ရည်မှန်းချက်သည် pixelated graphics နှင့် Android အတွက် RPG အဖြစ်အတော်လေးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Final Fantasy အပြီးတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
Incredible Limbo Platforms သည် Android သို့ရောက်ရှိလာသည်
Limbo သည်အမြင်အာရုံအရည်အသွေးနှင့်အရာဝတ္ထုရူပဗေဒဆိုင်ရာအထူးထိတွေ့မှုရှိသည့်အထူး platformer တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mikey Boots လို့ခေါ်တဲ့ပျော်စရာပလက်ဖောင်းကို Android မှာရရှိနိုင်ပါပြီ
iOS ကလာတဲ့ Mikey Boots လို့ခေါ်တဲ့ပျော်စရာကောင်းပြီးအလွန်ကောင်းတဲ့ပလက်ဖောင်း။ လူကြိုက်များ Noodlecake စတူဒီယိုကဒီဇိုင်း
[ဗွီဒီယို] SpongeBob သည်ရေထဲကသူရဲကောင်းရုပ်ရှင် SpongeBob ရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအပြေးသမား
ဒီနေ့ SpongeBob Android ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်တဲ့ SpongeBob ကို SpongeBob, ရေထဲကသူရဲကောင်းရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံပြီးပြေးပြီးပါပြီ။
အခု Android မှာ Eiichiro Oda ရဲ့ manga ကိုအခြေခံပြီး RPG One Piece Treasure Cruise
Bandai Namco မှ Japan တွင်အောင်မြင်မှုရခဲ့သော One Piece Treasure Cruise ဟုခေါ်သည့်အထူးအောင်မြင်သော manga ကိုထုတ်လုပ်သည်
Wave Wave - သင်၏အာရုံကြောများကိုစမ်းသပ်မည့်အခြားаркады
Wave Wave သည်မူလမူရင်း Arcade ဂိမ်းဖြစ်ပြီးဗီဒီယိုဂိမ်းအမြောက်အမြားဖြင့်အားလပ်ချိန်များတွင်လေ့ကျင့်ထားသောစွမ်းရည်များကိုစမ်းသပ်လိမ့်မည်
သင်၏မဟာဗျူဟာစွမ်းရည်ကို ၁၉၄၂ HandyGames မှ Pacific Front ဖြင့်ပြသပါ
၁၉၄၂ Pacific Front သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုအခြေခံသော HandyGames ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာမြောက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Transformers: Android တွင် Battle Tactics ကိုရရှိနိုင်ပြီ
Transformers: Battle Tactics သည်အကောင်းဆုံးသောစက်ရုပ်ဇာတ်ကောင်များကိုသင်၏ Android စက်မျက်နှာပြင်သို့ဗျူဟာမြောက်ဂိမ်းတစ်ခုဖြင့်ခေါ်ဆောင်လာသည်
Torchero သည် Boom သဲသောင်ပြင်အသစ်အသစ်နှင့်စစ်မြေပြင်၌သင့်ကိုစောင့်နေသည်
Torchero သည် Boom သဲသောင်ပြင်ရှိတိုက်လေယာဉ်များဖွဲ့စည်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုကမ်းလှမ်းရန် grenadier သို့ဆက်သွယ်သောတိုက်ခိုက်ရေးယူနစ်အသစ်ဖြစ်သည်။
Game of Thrones အပိုင်း (၂) ကိုယခုရရှိနိုင်သည်
Game of Thrones သည်ယနေ့ခေတ် The Lost Lords ဟုခေါ်သောဇာတ်လမ်းအသစ်ကိုထည့်သွင်းထားသည်
Kairosoft သည် Anime Studio Story ဟုခေါ်သောအခြားအံ့ with စရာတစ်ခုနှင့်ပြန်လည်ပတ်ခဲ့သည်
Anime Studio Story သည် Kairosoft ၏ခေါင်းစဉ်အသစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားတီဗီစတူဒီယိုကို anime ဇာတ်ကောင်များကို stardom သို့ပို့ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိန်းချုပ်စေသည်။
ARM ၏ Cortex-A72 အသစ်ကကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းများကိုအိတ်ဆောင် console များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးမည်ဟုကတိပေးသည်
ယနေ့ ARM သည် Cortex-A72 ဒီဇိုင်းသစ်ကိုတင်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အဓိကဖောက်သည်များရရှိနိုင်သောကြောင့် 2016 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည်။
Naughty Kitties ၏ကြောင်ကလေးများသည်နောက်ဆုံး၌ Android သို့ရောက်လာသည်
Naughty Kitties သည် Endless Runner နှင့် Tower Defense ဂိမ်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသော Android အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲများထဲမှတစ်ခု၏ဗားရှင်းအသစ်ကိုယခုအခါ Top Eleven 2015 ကိုရနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့ရာသီအလယ်၌ရှိသော်လည်း Top Eleven 2015 နှင့်အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားများထဲမှတစ်ခုကိုသင်ခံစားနိုင်သည်
Might & Magic III ၏အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်သူရဲကောင်းများသည် Android တွင်ဖြစ်သည်
Hero of of Might & Magic သည်သုံးစွဲသူများစွာ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Android သို့ဆိုက်ရောက်ခဲ့သောဗီဒီယိုဂိမ်းဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်
Android 4.4.4 Kit Kat ရှိလျှောက်လွှာနှင့်ဂိမ်းအချက်အလက်များကိုပြင်ပမှတ်ဉာဏ်သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
Android 4.4.4 Kit Kat တွင် application နှင့်ဂိမ်းအချက်အလက်များကိုပြင်ပမှတ်ဉာဏ်သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင်ပြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာကိုနှစ်သက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက၊
ယခု Witcher: Battle Arena၊ LOL ၏ခြေရာအတိုင်းလိုက်သော MOBA ပုံစံဗီဒီယိုဂိမ်းကိုရနိုင်သည်
Android မှာ LOL ဂိမ်းလိုလား။ ဟုတ်ပါတယ်, The Witcher: 3-player team match နှင့်ထူးခြားသောဂရပ်ဖစ်များဖြင့် Battle Arena ရှိသည်
စိတ်အေးချမ်းမှုနှင့်အတူကစားရန်အပြေးသမား Temple Subway ရထား
Temple Subway Train သည် Android အတွက်ဖျော်ဖြေရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Runner, Skill နှင့် Platforms တို့၏အယူအဆများကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်။
Android အတွက်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများ - ယနေ့ခေတ်၊ နောက်ထပ်လိုင်းတစ်ခု
Android အတွက် One More Line ပါ ၀ င်သည့်စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းကဏ္ section၊ သင်၏အာရုံကြောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်မည့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောစိတ်ပြင်းပြမှုနှင့်ကစားနည်းကိုဆက်လက်လေ့လာပါမည်။
Spoiler Alert ဟုခေါ်သောဤမူရင်း platformer နှင့်နောက်သို့ဆော့ကစားပါ
Spoler Alert သည်အခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းငယ်ရူးသွပ်သောပုံသေနည်းဖြင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သော်လည်းအောင်မြင်မှုနီးပါး
Worms ကိုဖန်တီးသူများထဲမှ Flockers သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Lemmings ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်သည်
Gameloft မှ Dragon Mania Legends နှင့်အတူမင်းရဲ့နဂါးများကိုမြှောက်ပါ
Dragon Mania Legends သည်သင့်အားနဂါးစစ်တပ်ဖြင့်ဗိုက်ကင်းများကျူးကျော်သောမြေများကိုပြန်လည်နေရာချထားပေးလိမ့်မည်
သင်၏ Pulse သည်ရာပေါင်းများစွာသောရန်သူများကိုကြီးစွာသော Tap Titans များဖြင့်ဖယ်ရှားရန်သင်၏အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်သည်
Tap Titans သည် Arcade ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် နှိပ်၍ ရန်သူအမျိုးမျိုးကိုသတ်ရမည်။
WWE Immortals ရှိ Pressing Catch ၏သဘာဝလွန်ကြယ်များကိုယခု Android တွင်ရနိုင်သည်
WWE Immortals သည်လက်စွပ်၏စူပါစတားများကိုမှောင်မိုက်သောကမ္ဘာသို့ပို့ဆောင်ပြီးသူတို့၏တိုက်ခိုက်မှုနှင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းစွမ်းရည်အားလုံးကိုပြသသည်
Monument Valley ချိုင့်တီထွင်သူများသည်သူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအဖြစ်အပျက်များကိုမျှဝေကြသည်
Monument Valley ကိုဖန်တီးခဲ့သော UsTwo Games သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၏ပြောင်မြောက်သောတိုက်ခိုက်မှုမှပျော်စရာကောင်းသောအချက်အလက်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများကိုမျှဝေခဲ့သည်
Godville သည်သင်ကစားစရာမလိုသောအလွန်ကောင်းသော RPG ဖြစ်သည်
ZPG ဂိမ်းဆိုသည်မှာကစားရန်မည်သည့်ကစားသမားနှင့်မှအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုမလိုအပ်ပါ။ သင်လွဲချော်လို့မရတဲ့ Play Store အတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှု
Kairosoft သည် Biz Builder Delux ဟုခေါ်သည့်အခြားကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်
Biz Builder Delux သည် Kairosoft စီမံခန့်ခွဲမှုအသစ်ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးဒီတောက်ပသောဗီဒီယိုဂိမ်းစတူဒီယို၏ကောင်းမွန်သောအလုပ်များနှင့်အတူပါ။
Android အတွက် Gunbrick တွင်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပလက်ဖောင်းများနှင့်ပဟေlesိများကို
မတော်တဆမှုများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ Crossy Road နှင့်အကောင်းဆုံးလမ်းဖြစ်သည်
Crossy Roads သည်ယခုအခါ Android ကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ရောက်ရှိလာသည့်ထူးခြား။ စွဲလမ်းစေသောဂိမ်းများကိုပိုင်ဆိုင်သည်
Android အတွက် NOVA 3: Freedom Edition ကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်
NOVA 3: Freedom Edition သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သော Gameloft ဂိမ်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Play Store အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်
Three Kings Day တွင်မင်းကိုအကူအညီမဲ့စွာချိတ်ဆက်နိုင်သည့်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောဂိမ်းများ
ရှုပ်ထွေးသောအဆင့်များနှင့်စပ်စုသောဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်သင့် ဦး နှောက်မှမီးခိုးရောင်အရာများကိုညှစ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားမည့်ပဟေgamesိဂိမ်း ၅ ခု
Three Kings Day အတွက်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှု ၅ ခုသည်သင်၏စက်အသစ်တွင်အကောင်းဆုံးဇာတ်လမ်းကိုခံစားနိုင်သည်
နည်းနည်း Dungeon II နှင့်အတူကောင်းသောလူဆိုးစာရင်းအမျိုးအစား RPG ပရောပရည်
Dungeon II bit နှင့်သင်၏သူရဲကောင်းသည်အကြိမ်များစွာသေဆုံးလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းဤအမျိုးအစားမှာဂိမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ Android ဖုန်းအတွက်အလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်
LEGO Star Wars: ယခုတွင် Saga ကို Android တွင်ရနိုင်သည်
Lego Star Wars - အပြည့်အဝ Saga ကို Android တွင်ရရှိနိုင်သော်လည်း Amazon app store မှသာရနိုင်သည်
Inferno 2, RPG ထိအတူပြင်းထန်သော Arcade
Inferno2သည် arcade ဂိမ်းဖြစ်ပြီးအဆင့် ၈၀ ကျော်အားပြိုင်ပွဲကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပြုလုပ်သည်။ အရောင်နှင့် Arcade စက်များ၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအလောင်းအစား
LEGO သည် BIONICLE ကိုအခမဲ့ဆော့ကစားသော Play Store သို့ယူဆောင်လာသည်
Lego Bionicle ကစားစရာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ဂိမ်း။ မိသားစုအပန်းဖြေမှု၏ဤနေ့များအတွက်အားလုံးအလှူငွေ
Crusaders Quest နှင့်အတူ RPG, retro pixelated စတိုင်နှင့် multiplayer အနည်းငယ်
Crusaders Quest သည်ကောင်းမွန်သော pixelated graph များပါ ၀ င်သည့် RPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်း Castaway နှင့်အတူရှင်သန်ရပ်တည်ရေးနှင့်စွန့်စားမှု: Lost World
ကျွန်းကတ်စ်ဝေး - ပျောက်ဆုံးသောကမ္ဘာသည်အောင်မြင်သောကြီးမားသောရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးများနှင့်ဆင်တူသည်
Sky Gamblers: ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အကောင်းဆုံးဝေဟင်ပစ်တိုက်ပွဲ Storm Raiders
Sky Gamblers: Storm Raiders သည်ဝေဟင်မှတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုအခြားအဆင့်အထိပြုလုပ်သည်။ Android အတွက်အကောင်းဆုံးဗီဒီယိုဂိမ်း
Android အတွက်စွဲလမ်းမှုအများဆုံးဂိမ်းများ၊ ယနေ့ ZOI Survival
ဒီနေ့ Android ZOI Survival အတွက်စွဲလမ်းစရာအကောင်းဆုံးဂိမ်းများမှာ
Devious Dungeon ပါသောဂရပ်ဖစ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု
Devious Dungeon ကကျွန်ုပ်တို့အားplayုံကစားနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောပလက်ဖောင်းဂိမ်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းအတွက်ရှေးဟောင်းနှင့်အလယ်ခေတ်ဆောင်ပုဒ်
Jules Verne သည်ရက်ပေါင်း ၈၀ ဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသည်
Jules Verne ကဒီရက်ပွဲမှာ 80 Days လို့ခေါ်တဲ့ဒီဂိမ်းမှာတွေ့ပြီးဒါကို Android အတွက်သုံးတဲ့ရတနာတွေထဲကတစ်ခုပါ။
Transformers: Disguise မှစက်ရုပ်များသည်ကာတွန်းစီးရီးအသစ်အားမည်သည့်အရာကိုပြမည်နည်း
Transformers: Disguise ရှိစက်ရုပ်များသည်နောက်နှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်ပြသမည့်ကာတွန်းစီးရီးအတွက်အကြိုမြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
သင့်ဖုန်း၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ပျောက်မသွားနိုင်သောအထူးဗီဒီယိုဂိမ်း ၁၀ ခု
Godus, Hearthstone သို့မဟုတ် Monument Valley ကဲ့သို့သောအရာများအတွက်အထူးကုသမှုပေးသောဗီဒီယိုဂိမ်း ၁၀ ခု
Android အတွက်အကောင်းဆုံး RPG ၁၀ ခု
ယခုနှစ်အတွင်း RPG ဂိမ်းများသည် Secret of Mana သို့မဟုတ် Dragon of Quest ကဲ့သို့သောဂန္ထဝင်များပြန်လာလာခြင်းနှင့်များစွာသက်ဆိုင်သည်
10 Android အတွက်ထူးခြားသော Console အရည်အသွေးဗီဒီယိုဂိမ်းများ
ဂရပ်ဖစ်၊ အသံနှင့်သမိုင်းတို့၏ထူးခြားကောင်းမွန်သောကုသမှုကြောင့်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောဂိမ်း ၁၀ မျိုးသည် console အမျိုးအစားအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
Star Wars: Knights of the Old Republic နှင့်အတူဂန္ထဝင်တစ်မျိုးကို Android သို့ပြန်လာခြင်း
ယနေ့မှ စ၍ Star Wars ၏ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးသမ္မတနိုင်ငံ Knights နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောအကောင်းဆုံး RPGS များထဲမှတစ်ခုကိုသင်ရယူနိုင်သည်
သင်၏ Android အတွက်သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် RPG တွင်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်ရှိသည့် EXILES
သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြင့်ဖော်ပြသောဗွီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုမှမျှော်လင့်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအမြင်အာရုံကုသမှုကို EXILES ကသင်၏ Android သို့ယူဆောင်လာသည်။
Monster Dash သည်နောက်ဆုံး၌ Play Store သို့ရောက်ရှိသွားသော Halfbricks စတူဒီယိုခေါင်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Monster Dash သည် Halfbrick စတူဒီယိုများနှင့် Android တွင်နောက်ဆုံးပေါ်နာမည်များဖြစ်သည်
TellTale Games မှဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Borderlands မှပုံပြင်များသည် Android ဖြစ်သည်
Borderlands မှပုံပြင်များသည် TellTale Games မှစွန့်စားမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား Borderlands လောကသို့ဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
Rockstar Games သည် Android တွင် GTA: Chinatown Wars နှင့်အတူပြန်နေသည်
GTA: Chinatown Wars သည် Rockstar Games ဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး iOS တွင်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးယခုအခါ Android တွင်ရနိုင်သည်။
Play Store တွင်ယခုဒဏ္myာရီဆန်သော Baldur's Gate II Enhanced Edition ကိုရရှိနိုင်သည်
Baldur's Gate II နှင့်အတူဒဏ္legာရီပုံပြင်များကိုစွန့်စားရသောယခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်မှာခရစ်စမတ်ဖြစ်သည်။ ဤကြီးမားသော RPG မတိုင်မီရက်ချိန်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်
မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကသို့ Viber ဝင်ရောက်သည်
သုံးစွဲသူများအပန်းဖြေအနားယူနိုင်ရန်အတွက် Viber သည်၎င်း၏ chat app တွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဗီဒီယိုဂိမ်းသုံးမျိုးကိုမိတ်ဆက်မည်
SimplePlanes, အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုလေယာဉ် Simulator ကို Android သို့လာသည်
Scrolls, Minecraft ကိုဖန်တီးသူထံမှယခုအခါ Android တွင်ရရှိနိုင်သည့်ဗွီဒီယိုဂိမ်းအသစ်
Mollcraft ဖန်တီးသည့်တာဝန်ရှိသည့် Mojang ပရိတ်သတ်အားလုံးအတွက်ပျော်စရာကောင်းစေရန် Scrolls များကို Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်။
ရုပ်သံစီးရီး Game of Thrones ကို Telltale Games မှ Play Store တွင်ရနိုင်သည်
TellTale Games မှ Game of Thrones နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုအားလုံးအားသင်ရနိုင်သည်။ အတော်လေးဂရပ်ဖစ်စွန့်စားမှု။
အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့်အတူ grenadier နှင့် sabotage သည် Boom သဲသောင်ပြင်သို့ရောက်ရှိလာသည်
Boom Beach သည် Android အတွက်မဟာဗျူဟာဖက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းသစ်တွင်သတင်းများပါရှိသည်
Shadowrun: Dragonfall သည် Android သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး၊
Shadowrun: Dragonfall ဟာကျွန်တော်တို့ Android အတွက်မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့ဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုပါပဲ
console classic Oddworld: Stranger's Wrath သည်အန်းဒရွိုက်တွင်ရှိသော်လည်းယခုအချိန်တွင်အမေဇုန်အတွက်သာဖြစ်သည်
Oddworld: Stranger's Warth သည်အမေဇုန်စတိုးတွင်သာရှိသော်လည်းမကြာမီ Play စတိုးသို့လာသည်
SNK သည်စီးရီး ၂၀ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပရန်အတွက်အခမဲ့ ၂၀၁၂ စစ်ပွဲ၏ဘုရင်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့သည်
SNK သည် Play Store တွင် The King of Fighters 2012 ဟုခေါ်သော pixelated combats နှင့်တိုက်ပွဲများ၏ဤနှစ်၏ရတနာကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
World of Tanks Blitz သည်ယခုအခါ Play Store တွင်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
World of Tanks Blitz သည်တစ်လစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်တင့်များအကြားအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲကိုခံစားရန် Play Store တွင်ရရှိနိုင်သည်
ဇာတ်လမ်းသစ် 'Pig Revenge' သည် Angry Birds II Star Wars II တွင်အဆင့်အသစ်များဖြင့်ထွက်ပေါ်လာသည်
Rovio ၏ Angry Birds Star Wars II ကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက်“ Swine's Revenge” ဇာတ်လမ်းအတွက်အဆင့် ၃၀ အသစ်
Godfire: Rise of Prometheus၊ ဇိမ်ခံဂရပ်ဖစ်နှင့်သင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ခြင်း
Godfire: Rise of Prometheus သည်အလွန်ကောင်းသောတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား Android အတွက်ထူးခြားသောဂရပ်ဖစ်များဖြင့် Prometheus ၏ဒဏ္myာရီထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
Electronic Arts ၏ SimCity BuildIt သည် Android သို့ရောက်ရှိလာသည်
SimCity BuildIt ဟုခေါ်သောဤမြို့ကြီးတည်ဆောက်ရေးစီးရီးမှခေါင်းစဉ်အသစ်တစ်ခုနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုများစွာဖြင့်လာသည်
Zoi the Escape သည် Android အတွက်စွဲလမ်း။ မဖြစ်နိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီနေ့မှာမင်းကို ZOI The Escape၊ Android အတွက်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဂိမ်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်သင်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှာပါ။
ခရစ္စမတ်သည် Hay Day သို့လာမည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အတူဘဲ၊ ဘဲ၊
Hay Day သည်အရည်ရွှမ်းသောခရစ္စမတ်ပုံစံအသစ်နှင့်ဘဲအသားပေးအလှပြင်ဆိုင်နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုဆောင်ကျဉ်းပေးသည်
အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းများ၊ ယနေ့ Mortadelo နှင့်Filemónတို့သည်ဗီဒီယိုဂိမ်း
ဒီနေ့မှာတော့ Mortadelo နှင့်Filemónတို့ဖြင့် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း Androidsis တွင်ဗွီဒီယိုအပိုင်းကိုစတင်လိုက်သည်။
Santa Tracker 2014, ခရစ်စမတ်အတွက်ဂူဂဲလ်ရဲ့အသေးစားဂိမ်းများ
Santa Tracker 2014 သည်ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Santa Claus ၏လမ်းကြောင်းကိုလိုက်လျှောက်နိုင်သည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည်
အစားအစာတိုက်ပွဲ - The Game နှင့်အတူမရပ်မနားချေမှုန်း Mutant Annihilate
Food Battle - ဒီဂိမ်းဟာအရောင်းရဆုံး၊ မလေးမစားပြုရသောပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပြီး Play Store ကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်ပြီးအပန်းဖြေနေ့လည်ခင်းအလွန်ချိုမြိန်စေရန်
Activision သည် Call of Duty: Clash of Clans အပြီးတွင်သူရဲကောင်းများကိုစတင်ခဲ့သည်
Call of Duty: သူရဲကောင်းများသည်ရန်သူများထံမှသင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သူနှင့်သင့်တော်သောအရာများပြုလုပ်ရန်၎င်းအားအားဖြည့်ရန်နှင့်မွမ်းမံရန်သင့်အားအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုပေးသည်။
ရဲစွမ်းသတ္တိ - မဟာစစ်ပွဲ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်သမိုင်းမာစတာ
Valiant Hearts: ပထမကမ္ဘာစစ်ကို Android တွင်သမိုင်းမာစတာအတန်းပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ပထမကမ္ဘာစစ်ကိုယူဆောင်လာသည်။
Godus သည် Android အတွက်အခမဲ့ပြုလုပ်ထားသောဘုရားသခင့်ပုံသဏ္gameာန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ခြေထောက်တွင်မြို့တစ်မြို့ရှိသည်ဟုခံစားရခြင်းကိုသင်ခံစားရရန်ဖြစ်သည်
ဂိမ်းကစားသူများ၊ သင်ကံကောင်းပါစေ။ Nintendo သည်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ထဲဝင်လာလိမ့်မည်
Nintendo သည်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများတွင် GameBoy console များကိုအတုယူရန်အမေရိကန်မူပိုင်ခွင့်ရုံးသို့မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည်
Android အတွက် Black Friday အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်း ၁၀ မျိုးကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လျှော့ချခဲ့သည်
ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့အတွက် Android အတွက် ၅၀% ကျော်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်သင်မမှတ်မိသောအရည်အသွေး ၁၀ ခု
Amazon ၏ Black Friday မှာဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ ယူရို ၁၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်သည်
စနေနေ့ ၂၉ ရက်နေ့အထိ Amazon Black Friday ၏ငြင်းဆိုစရာမလိုသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း ၄၀ ကျော်ကိုသင်ရနိုင်သည်
Ninja သည်အခြားကစားသမားများနှင့် NinJump Dash ဖြင့်ပြိုင်ဆိုင်သည်
NinJump သည် multiplayer mode ရှိပြီးအရူးနှင့်အရူး Ninja လူမျိုးများအတွက်ပျော်စရာနေရာဖြစ်သည်
[ဗွီဒီယို] Android 5.0 Lollipop မှမဖြစ်နိုင်သည့်ဂိမ်း Flappy Droid ကိုမည်သို့ဝင်ရောက်ရမည်နည်း
Flappy Droid လို့ခေါ်တဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android Lollipop ရဲ့အီစတာကြက်ဥကိုဝင်ကြည့်ပါ။
SEGA Football Manager Handheld 2015 ကို Android တွင်ရနိုင်သည်
Football Manager Handheld 2015 သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဘောလုံး Simulator တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အားနှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံများကိုသင်၏ Android ဖုန်းသို့ယူဆောင်လာလိမ့်မည်
99 Bricks Wizard အကယ်ဒမီ၏တီထွင်မှုနှင့်ရူပဗေဒအားလုံးနှင့်အတူ Tetris ကိုလှည့်ကွက်
99 Bricks Wizard အကယ်ဒမီသည်ကျော်ကြားပြီးအထင်ကရ Tetris နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သောအလောင်းအစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
Banner Saga သည် Norse ဒဏ္thာရီအပေါ် အခြေခံ၍ လှလှပပရေးဆွဲထားသောမော်ကွန်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုအဆိုပြုထားသည်
Banner Saga သည်ထူးကဲသောအမြင်အာရုံစတိုင်ဖြင့်လှပသောအပန်းဖြေနိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာအားဖြင့်သင့်ကိုယူဆောင်ပေးမည့်လက်ရာမြောက်သော Android ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Darkness Reborn သည် Android တွင်အကောင်းဆုံး MMO ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများပါ ၀ င်သည်
Darkness Reborn သည် Android အတွက်ထူးခြားသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ထဲ၌အကောင်းဆုံးသောထောင်ထဲမှ crawler ကိုယူဆောင်ပေးသည်။ ပျောက်ဆုံးမနေသင့်ကြောင်း RPG ။
မြန်နှုန်းအပြည့်အ ၀ လိုအပ်ပြီး၎င်းကို Android သို့အပြည့်အဝမြန်နိုင်မည်ဖြစ်သည်
သင်လိုအပ်သော Speed ​​No Limits သည်အီလက်ထရွန်နစ်အနုပညာမှကားမောင်းသည့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့် Android တွင်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်ပါ
Monument Valley: အမေဇုံ Appstore တွင်ရရှိနိုင်မေ့လျော့ကမ်းခြေ
Monument Valley: Forgotten Shores ကို Amazon app store တွင်ရနိုင်သည်။ Play Store မှနို ၀ င်ဘာ ၂၄ ရက်မှ Android အတွက်
အကောင်းဆုံးမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့သည် Kingdom Rush: Origins ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်
Kingdom Rush: Origins သည် Android အတွက်တတိယမြောက်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံး Android ကာကွယ်မှုကို Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်များတွင်ယူဆောင်လာသည်။ တစ် ဦး မရှိမဖြစ်
Strike Suit Zero, Tegra K1 စက်ပစ္စည်းများအတွက် MechWarriors နှင့်အတူအံ့မခန်းဖွယ် galactic တိုက်ပွဲများ
Strike Suit Zero နှင့် Interstellar အာကာသထဲရှိ MechWarriors အကြားတိုက်ခိုက်ပါ။ Tegra K1 နှင့်အတူတက်ဘလက်သည်
Buff Knight! RPG Runner၊ ရိုးရိုးလေးနှင့်စွဲလမ်းစေနိုင်သောအဆုံးမဲ့ပြေးသမား
ရိုးရှင်းသောဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်အဆုံးမဲ့အပြေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်ပထမဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည့် Buff Knight! ခဏ RPG Runner
မယုံနိုင်လောက်အောင်၊ တောက်ပပြီးထူးခြားလှသည့် TwoDots၊ တကယ့်ကိုချိတ်ဆက်ထားသောပဟေpိတစ်ခု
သင်၏ Android တွင်နာရီနှင့်နာရီကြာသုံးနိုင်မည့်ပဟေasိတစ်ခုအနေဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းတစ်ခုလုံး
XCOM: ရန်သူအတွင်း၌ရှိသောကြီးမားသော XCOM ဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုကျူးကျော်ခြင်းမှမြေယာကိုကာကွယ်ပါ
XCOM: Enemy အတွင်းမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ Android ဖုန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ။
RPG ဒဏ္endာရီတစ်ခုပြန်လာသည်။ ယခုအခါ Android တွင် Mana ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရနိုင်သည်
Secret of Mana သည်သင်၏ Android အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်တွင်ပျောက်ဆုံးမသွားနိုင်သော RPG ကျောက်မျက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
Galaxy Life နှင့်အတူ Intergalactic multiplayer: Pocket Adventures
သင်၏အခြေအနေကိုဖန်တီးပါ၊ အနီးအနားရှိဂြိုလ်များကိုကျူးကျော်ပါ။ စကြဝuniverseာရှိ Galaxy Life: Pocket Adventures
LG G Watch မှ PlayStation ဂိမ်းများကိုအတုယူခြင်း
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်လူတစ် ဦး သည် LG G Watch မှပထမဆုံးမျိုးဆက် PlayStation console မှဂိမ်းများကိုအတုယူနိုင်သည်။
အခမဲ့ MMO World of Tanks Blitz ကို Android အတွက်ရနိုင်သည်
PC မှလာသည့်စစ်ပွဲများဖြစ်သောစစ်ပွဲများဖြစ်သော World of Tanks Blitz သည် MMO ၏အခမဲ့ MMO
Contract Killer: Sniper နှင့်သင်၏မျက်လုံးကိုပြင်ဆင်ပါ
ကန်ထရိုက်များကိုလက်ခံ၊ ဘယ်နှင့်ညာကိုသတ်ပြီး Contract Killer: Sniper နှင့်အတူမာစတာလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သူ၏ဖိနပ်ထဲသို့ဝင်ပါ
ကျပန်း Adventure Roguelike သည် Android ရှိအကောင်းဆုံး MUD RPG အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
ပရိသတ်များနှစ်သက်ကြမည့်ကျောင်းဟောင်း RPG: Random Adventure Roguelike ။ စပိန်ကတီထွင်ခဲ့သည်
သင်၏အင်ပါယာကို Sid Meier ၏ Civilization Revolution2ဖြင့်တည်ဆောက်ပြီး Android တွင်ရနိုင်သည်
Android အတွက် Sid Meier ၏ Civilization Revolution2ကိုရရှိပြီ။ သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကိုလွှမ်းမိုးရန်မဟာဗျူဟာကောင်းတစ်ခု
Takos Japanese သည်ဂျပန်စာသင်ကြားရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သင်ဘယ်တုန်းကမှသင်မစဉ်းစားမိခဲ့သော်လည်းဤဗီဒီယိုဂိမ်းသည်သင့်ကိုဖမ်းမိလိမ့်မည်
Android အတွက် Battleheart Legacy နှင့်အတူယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံး RPG ဖြစ်သည်
Battleheart Legacy သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်များ၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သင့်အားမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုစိတ်ပျက်စေမည့်အလွန်ကောင်းသောစွန့်စားခန်းများပါသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သော RPG အဖြစ်လာသည်။
Icewind Dale: Enhanced Edition သည် Android အတွက်ဖြစ်သည်
Icewind Dale: Enhanced Edition သည် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင်အခန်းကဏ္returnsကိုပြန်လည်ပေးသည်။ RPGs နှင့် Dragons and Dungeons တို့၏မည်သည့်ပန်ကာကမျှမလွတ်နိုင်
Star Wars နှင့်အတူအင်အားကိုသုံးပါ: Galactic ကာကွယ်ရေး
Star Wars ကဲ့သို့သောမျှော်စင်ကာကွယ်ရေး: Galactic Defense သည် Star Wars စကြဝuniverseာကိုသယ်ဆောင်ရန်သင့်ကိုချိတ်လိမ့်မည်၊
Haunt the House: Terrortown နှင့်အတူသရဲတစ်ကောင်အနေဖြင့်သေခြင်းကိုကြောက်စရာကောင်းစေပါ
House: Terrortown ဟုခေါ်သောပျော်စရာကောင်းသော၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ မူရင်းနှင့်အလွန်ကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုအားကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးသည်။
Angry Birds Transformers ကို Android တွင်ရနိုင်သည်
သင်၏ရယ်စရာနှင့်အရူး Rovio ငှက်များကိုပျော်မွေ့ပါစေ။ ဤအချိန်သည် Angry Birds Transformers နှင့်အတူစက်ရုပ်
အမေဇုံမှဟယ်လိုဝိန်းပွဲ - ယူရို ၁၀၀ ကျော်တန်ဖိုးရှိသောအခမဲ့ပေးရသည့်အက်ပလီကေးရှင်း ၄၀
ဟယ်လိုဝင်းအတွက်အခမဲ့ပေးဆောင်ရသော App ၄၀ သည်ထူးခြားသောဂိမ်းများနှင့်ဆင်တူသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်အမေဇုန်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်
Freddy's တွင် Halloween: Slender Rising နှင့် Five Nights ဂိမ်းများအတွက်ကြောက်စရာကောင်းသောဂိမ်းနှစ်မျိုး
Slender Rising and Five Nights Freddy's သည်ဟယ်လိုဝင်းညကို သုံး၍ သင့်အရေပြားပေါ်တွင်ချွေးစေးနည်းနည်းခံစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂိမ်းနှစ်ခုဖြစ်သည်။
ရဲများသည် Android အတွက်ရိုးရိုးလေး၊ စွဲလမ်းစေတတ်သော၊
Pako သည်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုမြို့လမ်းများ၏လမ်းများပေါ်တွင်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပြီး Flappy Bird နှင့်ဆင်တူသည့်ဂရပ်ဖစ်ကောင်းများကိုရိုးရှင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြင့် ဦး ဆောင်နေသည်။
Micro Battles သည်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုမှသူငယ်ချင်းနှင့်အတူဂန္ထဝင်ဂိမ်းများကစားရန်
Micro Battles မှာဂိမ်းလေးခုရှိပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ကစားနိူင်မှာပါ
ကဒ် Dungeon ကော့တေး - ဘုတ်အဖွဲ့၊ ရော်ဂျာလိုနှင့်ကဒ်များ။
Card Dungeon သည် Android သို့လာသည်။ ဂိမ်း၊ ကတ်နှင့် roguelike တို့နှင့်ပေါင်းစပ်သည်
République, ထူးကဲသောပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Orwellian စွန့်စားမှုဂိမ်း
Républiqueသည်ယခုနှစ် Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာနိုင်သည့်ထိုဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Exquisiteness နှင့်ပါရမီ။
ကြီးမားသော Boom သဲသောင်ပြင် update တွင် Dark Guard ကိုအနိုင်ယူရန်အခြားကစားသမားများနှင့်ပူးပေါင်းပါ
Boom သဲသောင်ပြင်သည်ပျော်စရာများစွာပေးမည့် multiplayer cooperative mode နှင့်အရည်ရွှမ်းသော update ကိုယူဆောင်လာသည်
Reckless Racing 3, အဆုံးစွန်ပျံ့ပြိုင်ကားဂိမ်းပြန်လာ
Android အတွက်ယနေ့ခေတ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့်အကောင်းဆုံးပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူပြိုင်ပွဲဂိမ်းအတွက် Isometric အမြင်။ ရက်ချိန်းကိုသင်မလွတ်နိုင်ပါ
GTA San Andreas ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကို Android ပေါ်တွင် Grand Theft Auto trilogy ကိုရောင်းချခဲ့သည်
Grand Theft Auto Andreas ၏ ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ဖြစ်သော Rockstar Games သည်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက်ဂိမ်းသုံးမျိုးတွဲကိုကမ်းလှမ်းနေသည်။
Blizzard's Hearthstone သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင် Android တက်ဘလက်များသို့လာမည်
Blizzard's Hearthstone သည်ယခုနှစ်မကုန်မီ Android တက်ဘလက်များထိမှန်မည်။ အတော်လေးကြီးစွာသောအခမဲ့ကဒ်ဂိမ်း။
Atari သည် RollerCoaster Tycoon4ကို Play Store သို့လွှတ်တင်သည်
Android ပေါ်ရှိ Atari မှ RollerCoaster Tycoon4လာပါတယ်။ တစ် ဦး freemium မော်ဒယ်နှင့်အတူတစ် ဦး ကအလွန်ကြီးစွာသော Simulator
Botanicula သည် Machinarium ကိုဖန်တီးသူများမှအသစ်ဖြစ်သည်
Botanicula သည် Machinarium ကိုဖန်တီးသူများမှအသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အထူးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ Android ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်တွင်သင်လွတ်သွားနိုင်သည်မဟုတ်
Hay Day အသစ်အဆန်းဖြင့်သင်၏လယ်ယာတွင်ပျားများအများဆုံးရရှိပါ
Hay Day နေ့မွမ်းမံမှုသည်ဆောင်း ဦး ရာသီအခမ်းအနား၊ ဖယောင်းထုတ်ကုန်အသစ်နှင့်ရနံ့ဖယောင်းများထုတ်လုပ်ရန်စက်အသစ်တစ်ခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်
ဘတ်စကတ်ဘော၏မှော်အတတ်အားလုံးသည် NBA 2K15 ဖြင့် Android ဖြစ်သည်
၎င်းသည် Play Store တွင်မရှိသော်လည်း၎င်းကို Android အတွက် Amazon app store သို့မဟုတ် Fire tablet မှပင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်
Amazing Android Games: Today Line Crosser
Line Crosser သည် Android အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးစွဲလမ်းမှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။
တာ ၀ န်ခံသူများသည်မျှော်စင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ထိုက်သင့်သည်
Tower Dwellers သည်၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်ကုသမှုနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းတို့ကြောင့် Kingdom Rush မှလှုံ့ဆော်ပေးသောမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဖြစ်သည်
PlayStation မှလာသည့်ဂိမ်းကောင်းတစ်ခုအတွက် CounterSpy နှင့်အတူ Console ဂရပ်ဖစ်များ
CounterSpy လို့ခေါ်တဲ့ Android ပေါ်ရှိ console ဂိမ်းအတွက်ဂရပ်ဖစ်အချို့ ဂရပ်ဖစ်နှင့်ကစားနိုင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ထူးချွန်
Cars: Playning Store တွင် Lightning မြန်လျှင်အခမဲ့ရနိုင်သည်
Gameloft ၏လက်မှကားများ: Fast: Lightning - ထွက်လာသည်။ Disney ရုပ်ရှင်ကိုအခြေခံထားသောအထင်ကြီးစရာကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယခုကျွန်ုပ်တို့ Google Play Store တွင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
Square Enix သည်သင်မမှတ်မိသောဘောလုံးမန်နေဂျာ Champ Man 15 ကိုစတင်ခဲ့သည်
Champ Man 15 သည်အာဆင်နယ်နည်းပြအာဆင်ဝင်းဂါးအားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘောလုံးအဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုသူအားနိုးထစေသောခေါ်ယူမှုအဖြစ်ယူဆောင်လာသည်။
Dark Guardians, အကောင်းဆုံးဓားများနှင့်အတူလျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှု - ထုပ်ပိုးခြင်းဂိမ်း
မူလ Dark Guardians ၏တေးဂီတသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Android တွင်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သောဂိမ်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်
သူခိုး Lupine2သည်သူခိုးဖြစ်လာရန် Play Store သို့လာသည်
သူခိုး Lupine2တွင်သင်၏ terminal တွင်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်များထည့်သွင်းထားသည်။ တစ် ဦး ကပြည့်စုံစုံ freemium
Tegra မဟုတ်သောဆိပ်ကမ်းများ၌ Tegra ဂိမ်းများကစားနည်း
XDA သုံးစွဲသူ၏အဆိုအရ Tegra မဟုတ်သည့်ဆိပ်ကမ်းများ၌ Tegra ဂိမ်းများကိုကစားရန်ခွင့်ပြုသည့်ဤ Android လှည့်ကွက်ဖြစ်သည်။
Ironclad Tactics သည် Plants vs Zombies စုဆောင်းထားသောကဒ်ပြားသမိုင်းကြောင်းနောက်ခံရှိသည်
Ironclad Tactics သည်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်သို့သမိုင်းဝင်နောက်ခံအဖြစ်ယူဆောင်သွားပြီး steampunk ကိုအမြင်အာရုံထိတွေ့စေသည်
Hellraid: The Escape ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များ၊
Hellraid: Escape ကမင်းကိုဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားပြီးနက်ရှိုင်းရှုပ်ထွေးပြီးရှုပ်ထွေးနက်နဲတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲ၊ ထောင်ထဲအပြည့်ပါ ၀ င်ပြီးပဟေdozensိများစွာဖြင့်မင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ, ပစ်ခတ်မှု, လုယက်မှုများနှင့်ပေါက်တွေမှာအပြေးပြိုင်ပွဲ။ သင် Kitten Taxi နှင့်ဝံ့ပါသလား။
Kitten Taxi သည်သင်၏ Android တွင်အရောင်ခြယ်ထားသည့်အပေါ် အခြေခံ၍ အလွန်ထူးခြားသောအမြင်အာရုံစတိုင်နှင့်ပျော်စရာကောင်းသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂိမ်းဖြစ်သည်
Android မှာသင်မလွတ်နိုင်တဲ့ retro-style grafic တွေနဲ့ roguelike ဂိမ်း ၃ ခု
Roguelike ကဲ့သို့သောဂိမ်းများသည် Pixel Dungeon ကဲ့သို့သောသူတို့၏အလွန်ခက်ခဲသောအခက်အခဲများ၊ RPG ထိတွေ့မှုနှင့်အတူကျပန်းမြေပုံများပြသရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
Asphalt Overdrive သည် Android သို့လျင်မြန်စွာပြေးနိုင်သောကာလီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်
Asphalt Overdrive သည်မတူညီသော mode များနှင့်အလွန်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်များရှိသည့်ပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ Android သို့အမြန်နှုန်းရောက်စေသည်
Ubisoft's Just Dance Now နှင့်သင်၏သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ကခုန်ခြင်း
Just Dance Now သည်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်မရပ်မနားသောအကများဖြင့်ပျော်စရာကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ဒီမျှော်စင်ကာကွယ်ရေး Saga ၏နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ် Anomaly Defenders နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်
Anomaly Defenders၊ ဒီမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးစစ်ဆင်ရေးတွင်အခြားကောင်းမွန်သောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်အကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်များကိုသယ်ဆောင်ပေးသည်
neo punk အခြေအနေများနှင့်အတူ Machinarium စတိုင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပဟေlesိများနှင့်စွန့်စားခန်းများမှတစ်ဆင့်စက်ရုပ်လေးတစ်စီးယူရမည်။
Falcon Pro ကိုဖန်တီးသူသည် Hacked ဟုခေါ်သောဟက်ကာဂိမ်းနှင့်အတူရောက်လာသည်
၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အသုံးချနိုင်ရန်အတွက် Hacked ပရိုဂရမ်အခြေစိုက်စခန်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ Twitter client ကို Falcon Pro ကိုဖန်တီးသူမှဖန်တီးသူ
Android အတွက် FIFA15 Ultimate Team ကိုယခုအခါ Play Store တွင်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်
Android အတွက်အကောင်းဆုံး FIFA15 Ultimate Team ကိုယခု Google Play Store တွင်အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Clumsy Ninja၊ သင်ချစ်ရမည့် Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဂိမ်း
Clumsy Ninja သည် Android အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်က၎င်း၏အဓိကဇာတ်ကောင် Clumsy ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူသင်အရောင်မှိန်သွားလိမ့်မည်။
Pyro Mobile သည် Android အတွက် Commandos အသစ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။
Pyro Mobile မှတစ်ဆင့်လူကြိုက်များသောစစ်ရေးမဟာဗျူဟာဂိမ်း Commandos သည်သင်၏ Android ဖုန်းသို့လာလိမ့်မည်
တစ်ချိန်တည်းမှာသူငယ်ချင်း ၈ ယောက်နှင့် BombSquad နှင့်ကစားခြင်းသည်လျင်မြန်စွာကစားသည့် multiplayer mode တွင်ဖြစ်သည်
ကစားသူ ၈ ယောက်အထိသည်အလွန်ကောင်းသောဂရပ်ဖစ်နှင့် BombsQuad ဟုခေါ်သောဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်ပျော်မွေ့နိုင်သည်
4 Android ဂိမ်းများသည်ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးသင်နှစ်သက်လိမ့်မည်
ဒီနေရာမှာကလေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံး Android ဂိမ်းအမျိုးအစား ၄ မျိုးကိုသင်ရွေးချယ်ထားပါသည်။
Interstellar၊ Paramount ၏လာမည့်သိပ္ပံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည်သင်၏ Android တွင်ရှိသည်
Interstellar သည်ရုပ်ရှင်ကို အခြေခံ၍ သူတို့စတင်သောပုံမှန်ဂိမ်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်နှစ်ဖက်စလုံးမှအရည်အသွေးလျော့နည်းစေသည်
သဲသောင်ပြင် Buggy ပြိုင်ပွဲဖြင့်သင့်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာကစားနိုင်သောပြိုင်ပွဲမျိုးစုံရှိသည်
မိနစ် ၂၀ ကြာသည်အထိကစားနိုင်ခြင်းမရှိသောသဲသောင်ပြင် Buggy Racing သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နိုင်သည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်စေသည်
Android အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များ - Hoy Cienciados၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဂိမ်း
Cienciados သည် Android အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာ application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်၌ဗဟုသုတတိုးပွားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Android မှာရရှိနိုင်တဲ့ irreverent Goat Simulator ဗီဒီယိုဂိမ်း
ဆိတ် Simulator သည် Flappy Bird နှင့်အခြားသူတစ် ဦး ဦး တို့၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၂၀၁၄ ၏ဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Clash of Clans ဗားရှင်းသစ်တွင်ပျံသန်းသောအမှောင်ထုအသစ်တစ်ခုသည်သင့်အားစောင့်ကြိုနေလိမ့်မည်
Clash of Clans ဗားရှင်းအသစ်တွင်သင်၏အမှိုက်သရိုက်များ၏ပျံသန်းမှုယူနစ်အသစ်သည်သင်၏စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းလာသည်
ပျားများသင်၏လယ်ယာသို့ Hay Day အသစ်ပြောင်းခြင်းသို့ရောက်လာသည်
Hay Day အသစ်ပြောင်းလဲမှုသည်ပျားရည်ထုတ်ယူသူနှင့် ၀ တ်မှုန်ပျားများပါ ၀ င်သည်
Air Hockey အသစ်တီထွင်ထားသော Futu Hoki ရှိကစားသမားများ၊ Tron ပုံစံဂရပ်ဖစ်နှင့်လက်နက်များ
Futu Hoki သည် Air Hockey ဂိမ်းဖြစ်ပြီးကစားသမားအများအပြားနှင့် Tron ရုပ်ရှင်နှင့်ဆင်တူသည့်ဂရပ်ဖစ်စတိုင်ဖြစ်သည်
ဒီနေ့ဒီဂိမ်းကြီးကိုငါဆောင်ခဲ့ပြီ။ Swordigo ဟာ RPG နဲ့ပလက်ဖောင်းတွေကိုပေါင်းစပ်ပေးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ Zelda စတိုင်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ပေါင်းစပ်ထားတာပါ
Spider-Man Unlimited ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ
ဂူဂဲလ်ပလေးတွင်အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့် Spider-Man Unlimited ဂိမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်အကြံပြုပါသည်။
Rhythm of Fighters သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကတွင်ခေတ်မှီဆန်းပြားသော In-app ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူ "freemium" model သို့သွားသောဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သည်။
Android အတွက် Rote ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏ထူးခြားချက်များကိုအကောင်းဆုံးရယူပါ
Android အတွက် Rote သည်သင့်ကိုခါးသီးသောလမ်းပေါ်၌ငါခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သောထိုပဟေofိများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။